Iindaba - Iimbangela zePores ezinkulu
Ama-pores amakhulu anokwahlula kwiindidi ze-6: uhlobo lweoli, uhlobo lokuguga, uhlobo lokuchithwa kwamanzi, uhlobo lwe-keratin, uhlobo lokuvuvukala, kunye nokunyamekela okungafanelekanga.
1. Iimbobo ezinkulu ze-oyile
Ixhaphake ngakumbi kulutsha kunye nolusu olunamafutha.Kukho ioli eninzi kwindawo ye-T yobuso, i-pores yandiswe kwi-U-shape, kwaye ulusu luphuzi kwaye lunamafutha.
Kunconywa ukuba uhlambulule ulusu imihla ngemihla ukulawula ulusu olunamafutha.
2. Ukuguga-uhlobo lwemibhobho emikhulu
Ngeminyaka yobudala, i-collagen ilahlekile kwi-300-500 mg / ngosuku ukusuka kwiminyaka eyi-25. I-Collagen ilahlekelwa amandla ayo kwaye ayikwazi ukuxhasa ama-pores, okubangela ukuba ii-pores zikhululeke kwaye zibe zikhulu.Iipores eziguga zixhomekeke kwimilo yamaconsi amanzi, kwaye i-pores ixhunyiwe kwilungiselelo lomgca.
Kunconywa ukuba uncedise i-collagen, kunye neenkqubo zokulwa nokuguga ukuze kuphuculwe ubuninzi besikhumba kunye nokuqina.Sebenzisa i-sunscreen yonke imihla.
3. Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni-uhlobo pores ezinkulu
Ulusu lubonakala lomile, i-keratin ekuvulekeni kweembobo iyancitshiswa, iipores zandiswe ngokucacileyo, kwaye i-pores i-oval.
I-hydration yemihla ngemihla iyacetyiswa.
4. Iimbobo ezinkulu zeKeratin
Ikakhulu kubantu abanokucocwa ngendlela engafanelekanga, eyona nto iphambili ye-keratinous pores kukungaqhelekanga kwe-keratin metabolism.I-stratum corneum ayikwazi ukuwa ngokuqhelekileyo, kwaye ixuba kunye ne-sebum kwi-pores ukuvimba iipores.
Kunconywa ukuba uhlambulule ngokunzulu ulusu, sebenzisa izixhobo zobuchwephesha ukususa inxalenye ye-cutin yokuguga, kwaye wenze umsebenzi omhle wokuthambisa kunye nokukhuselwa kwelanga emva kokukhupha.
5. Iipore ezinkulu zohlobo oluvuthayo
Ikakhulu iyenzeka ngexesha lokuphazamiseka kwehomoni ebusheni, ukucudisa amaqhakuva, kunye nomonakalo kumaleko wedermis, kulula kakhulu ukubangela amanxeba atshonelweyo.
Kucetyiswa ukuba ungacinezeli i-acne ngezandla zakho ukuze ugweme ukukhwabanisa.Ngexesha elifanayo, liphathwa ngeeprojekthi ze-photoelectric.
6. Ukunyamekela okungafanelekanga kukhokelela kwiipores ezinkulu
Ukuba awuyihoyi i-sunscreen yonke imihla, imisebe ye-ultraviolet eninzi kunye nemitha yemitha iya kubangela i-radicals yamahhala kwi-skin surface kwaye iqhekeze isakhiwo sesikhumba.Ukunyamekelwa ngokugqithisileyo kolusu kunye nokusetyenziswa ngokungafanelekanga kwezithambiso kunokubangela iipores ezandisiweyo, nazo.
Kunconywa ukwenza ukukhuselwa kwelanga kwimihla ngemihla, musa ukunyamekelwa kwesikhumba.
Imithombo yokukhanya ehambelanayo inokomeleza ukubonakaliswa okukhethekileyo kwaye yenze buthathaka imbonakalo esasazekayo;Ukukhanya okunqamlezileyo kunokugqamisa ukubonakaliswa kokusabalalisa kunye nokuphelisa ukubonakaliswa okukodwa.Kumphezulu wolusu, isiphumo sokubonakaliswa kwespecular sibonakala ngakumbi ngenxa yeoyile yomphezulu, ngoko ke kwimowudi yokukhanya ehambelanayo, kulula ukujonga iingxaki zomphezulu wolusu ngaphandle kokuphazamiseka kukukhanya okunzulu okubonakalayo.
Ukukhanya kwepolarized parallel kungasetyenziselwa ukubona iingxaki ezinkulu zeporesumatshini wokuhlalutya ulusu. Umhlalutyi wesikhumba weMeicetsebenzisa i-parallel polarized light, lungelelanisa ne-algorithm enenzuzo ukwenza uhlalutyo lobungakanani bepores.